Iwe Uri Kupotsa 3 pa5 Sense paKugadzira Chiitiko | Martech Zone
Iwe Uri Kupotsa 3 pa5 Sense paKugadzira Chishamiso
NeChishanu, Nyamavhuvhu 22, 2014 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Ini ndanga ndiripo kune ichangobva kuburitswa bato rekuprinda-chete chinyorwa nezve chikafu chikafu cheMidwest. Sezvo ini ndataura kune timu yakagadzira, pakanga paine kudada kunoshamisa mune zvese zvirimo, hunyanzvi, uye chigadzirwa chakapedzwa. Magazini yacho yaive yakasimba uye iwe waigona kunzwa kunaka kwepepa, kunhuhwira kutsva kudhindwa, uye zvishoma kuravira chikafu chakatsanangurwa zvakanyanya mumagazini.
Zvakandiita kuti nditange kufunga nezve zvinoonekwa zvinosiiwa nevatengesi. Isu takasungirirwa padhijitari midhiya mazuva ano nekuda kwemutengo wakaderera uye kugona kwetekinoroji izvo isu tinokanganwa kuti vanhu vazhinji vanongoona zvatakaita kuburikidza nemeseji nemifananidzo. Kana tikazvitora notch, tinogona kuita vhidhiyo kwavanogona izvozvi ona uye nzwa isu. Asi izvo zvinongova zviviri chete zveshanu pfungwa dzatinokwanisa kusvika.
Kana uchida kurudzira kutungamira, hazvisi zvekusundidzira imwe email mubhokisi ravo rekunyora. Iwe unofanirwa kusvika kune iwo anotungamira uye nekuita fungidziro kana iwe uchida kuvatyaira kuti vatore nhanho inotevera kuenda mukutenga, kusaina-chibvumirano, kana kuwedzera kwavo kushandisa nesangano rako.
Ungaita sei kuti usvike kune dzimwe pfungwa - bata, hwema, uye kuravira - kusiya fungidziro isingaperi? Kana iwe uri mutaundi rimwe chete, pamwe zviri nyore sekutora yako tarisiro kana mutengi kuenda kunodya. Asi vazhinji vedu tinoshanda kunze kwenzvimbo yekutyaira saka sarudzo idiki. Zvichida unogona kuve nechigadzirwa chigadzirwa chakagadzirwa kana chidimbu chedhinda chakagadzirwa. Zvichida iwe unogona kusanganisira bhodhoro rewaini kana chinonaka chemunzvimbo chinotumirwa neposvo.
Izvo zvaimbove zvakajairwa izvozvi zvave zvisingawanzo - kunongedzera kune unoshamisa mukana wekuzvitsauranisa iwe kubva kumakwikwi ako. Chii chaungaite kuti usiye unogara uchibata nekubata, kunhuwa, uye kuravira?
Tags: 5 pfungwab2b kutungamira chizvarwahukama hwevatengihukama hwevatenginzwakutungamirira kutarisiraMarketingkusimudziraonapfungwakunhuwatorakubata
Riffle: Tora Iyi Chrome Twitter Plugin Zvino!
MobileAppTracking: SDK yeMafoni Kuisa Attribution